तार विना चार्ज गर्न मिल्ने आइप्याड बजारमा ल्याउँदै एप्पल, कति पर्छ मूल्य ? « Salleri Khabar
तार विना चार्ज गर्न मिल्ने आइप्याड बजारमा ल्याउँदै एप्पल, कति पर्छ मूल्य ?
प्रकाशित मिति : 8 June, 2021
२५ जेठ, एजेन्सी । विश्वकै अग्रणी सूचना प्रविधि कम्पनी एप्पलले तार विना चार्ज गर्न मिल्ने आइप्याड चाडै नै बजारमा ल्याउने जनाएको छ । अहिले नयाँ विषेशता सहितको आइप्याड परीक्षणकै क्रममा रहेकाले अर्को बर्षसम्ममा बजारमा आउने कम्पनीले जनाएको छ ।
तार विना चार्ज हुने ट्यावलेट प्लग लगाएर चार्ज गर्ने ट्यावलेटभन्दा बढी टिकाउ हुनेपनि कम्पनीका अधिकारीहरुले जनाएका छन् । चार्जर विना चार्ज गर्न मिल्ने आइप्याडमा अन्य नयाँ विषेशताहरु पनि थप्ने तयारी भइरहेको उनीहरुको भनाइ छ ।
विना तार चार्ज गर्न मिल्ले डिभाइस एप्पलकै अन्य डिभाइज चार्ज गर्न पनि मिल्ने बताइएको छ । एउटै डिभाइसले आइप्याड वा आइफोनलाई पनि चार्ज गर्न मिल्ने उनीहरुले दावी गरेका छन् । तार विना पनि चार्ज गर्न मिल्ने भएपछि त्यसको प्रयोग धेरै सजिलो हुने र लोकप्रिय पनि हुने देखिएको छ ।
प्लगबाट चार्ज गर्नुपर्ने मोवाइलहरु चार्जका लागि विद्युतको लाइन भएकै ठाउँमा राख्नु पर्ने बाध्यताले भएका कतिपय कठिनाइ अव हट्ने भएको छ ।
यो आइप्याडको मूल्य पहिलो संस्करणका आइप्याडहरूको भन्दा केही महँगो हुने अन्तरराष्ट्रिय मिडियाहरूले अनुमान गरेका छन् । तर, निश्चित मुल्य भने सार्वजनिक भइसकेको छैन ।